Wararka - Ku saabsan horumarinta tiknoolajiyadda shaandhaynta isku xiraha korontada
Ku saabsan horumarinta tiknoolajiyadda shaandhaynta korontada
Iyada oo la horumarinayo tiknoolajiyadda shaandhaynta korontada, tiknoolajiyadda shaandhayntu aad bay waxtar ugu leedahay xakamaynta faragelinta electromagnetic, gaar ahaan calaamadda EMI ee beddelidda korontada, taas oo kaalin fiican ka qaadan karta hagidda faragelinta iyo shucaaca faragelinta. Calaamadaha faragelinta hab kala duwan iyo calaamadaha faragelinta habka caadiga ah waxay meteli karaan dhammaan calaamadaha faragelinta tabinta ee korontada.
Midda hore waxay inta badan tilmaamaysaa calaamadda faragelinta ee lagu kala qaado laba fiilo, taas oo iska leh faragelinta summateedka waxaana lagu gartaa soo noqnoqosho hooseysa, baaxadda faragelinta yar iyo faragelinta elektromagnetic yar -yar. Tan dambe waxay inta badan tilmaamaysaa gudbinta calaamadaha faragelinta ee u dhexeeya siligga iyo xayndaabka (dhulka), kaas oo iska leh faragelinta asymmetric, waxaana lagu gartaa soo noqnoqoshada sare, baaxadda faragelinta weyn iyo faragelinta elektromagnetic ee weyn ee la soo saaray.
Iyada oo ku saleysan falanqaynta kor ku xusan, calaamadda EMI waa la xakamayn karaa oo ka hooseysaa heerka xadka ee lagu qeexay heerarka EMI si loo gaaro ujeeddada yareynta faragelinta. Ka sokow xakamaynta wax ku oolka ah ee ilaha faragelinta, shaandhooyinka EMI ee lagu rakibay soo -gelinta iyo soo -saarka wax -soo -saarka ee korontada beddelka ayaa sidoo kale ah hab muhiim ah oo lagu xakameeyo faragelinta elektromagnetigga. Soo noqnoqoshada hawlgalka ee aaladaha elektiroonigga ah badanaa waa inta u dhaxaysa 10MHz iyo 50MHz. Qaar badan oo ka mid ah jaangooyada EMC ee xadka heerka faragelinta ugu hooseeya ee 10 MHZ, oo loogu talagalay soo noqnoqoshada sare ee korantada korantada korantada ee EMI, illaa iyo inta xulashada qaab dhismeedka shabakaddu ay tahay mid aad u fudud shaandhaynta EMI ama kala -goynta wareegga shaandhaynta EMI waa mid fudud, ma aha oo keliya Ujeedada lagu yareynayo xoojinta xad-dhaafka caadiga ah ee hadda jira, sidoo kale waxay qancin kartaa saamaynta shaandhaynta ee xeerarka EMC.
Mabda'a naqshadeynta isku xiraha korantada shaandhaynta wuxuu ku saleysan yahay mabda'a kore. Waxaa jira dhibka faragelinta labada dhinac ee u dhexeeya qalabka korontada iyo korontada iyo inta u dhaxaysa qalabka korontada ee kala duwan, iyo isku xiraha korontada shaandhaynta ayaa ah doorasho ku habboon si loo yareeyo faragelinta. Maaddaama biin kasta oo isku xiraha shaandhaynta uu leeyahay shaandho-baas hoose, biin kasta wuxuu si wax ku ool ah u shaandhayn karaa habka caadiga ah ee hadda jira. Intaa waxaa dheer, isku xiraha korantada shaandhaynta ayaa sidoo kale leh iswaafajin wanaagsan, cabbirkiisa is -dhexgalka iyo cabbirka qaabka iyo isku -xiraha korantada caadiga ah waa isku mid, sidaa darteed, si toos ah ayaa loo beddeli karaa.
Intaa waxaa dheer, adeegsiga isku xiraha korontada shaandhaynta ayaa sidoo kale leh dhaqaale wanaagsan, taas oo badanaa sababta oo ah isku xiraha korontada shaandhaynta wuxuu u baahan yahay oo kaliya in lagu rakibo dekedda kiiska gaashaaman. Ka dib marka ay tirtirto faragelinta hadda ku jirta fiilada, kaariyuhu mar dambe ma dareemi doono calaamadda faragelinta, sidaa darteed waxay leedahay waxqabad ka xasilloon tan kabka gaashaaman. Xidhiidhiyaha korontada ee shaandhaynaya ma laha shuruudo sare oo loogu talagalay isku xidhka dhammaadka fiilada, markaa uma baahna in la isticmaalo xadhig gaashaan oo tayo sare leh oo dhan, taas oo sii muujinaysa dhaqaalaheeda wanaagsan.
Waqtiga dhejinta: Oct-19-2019